Puntland Archives - Page 76 of 89 - Puntland Mirror Believable Media Website
October 1, 2016 Puntland Mirror 0
Garowe-(Puntland Mirror) Wasiir dowlihii madaxtooyada dowlada Puntland Maxamed Cabaas Macalim ayaa is-casilay shalay oo Jimce ahayd, isagoo sheegay arrimo isaga u gaar ah in uu isku-casilay. Maxamed Cabaas oo tan iyo 2014-kii kamid ahaa golaha […]
Wasiirkii warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocade oo iscasilay
September 26, 2016 Abdi Omar Bile 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiirka warfaafinta dowlada Puntland Maxamuud Xasan Soocade ayaa maanta oo Isniin ah iska casilay xilkiisii. Soocade oo la hadlay warbaahinta maxaliga ah ayaa sheegay in uu isku casilay arrimo isaga u gaar ah […]
September 25, 2016 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Axad ah dhagax-dhigay dhisme cusub oo ay yeelan doonto wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland. Munaasabada dhagax-dhiga ayaa waxaa madaxweynaha ku waheliyay wasiirka […]
September 24, 2016 Puntland Mirror 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay kadib isk-hor imaad u dhaxeeya ciidamo katirsan dowlada Puntland iyo maleeshiyo beeleed deegaanka ah oo ka dhacay maanta oo Sabti ah magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. […]
Banaanbax looga soo horjeedo ka noqoshada go’aankii lagu joojiyay baabuurta ka timaada Koonfurta Soomaaliya oo Gaalkacyo ka dhacay
September 22, 2016 Puntland Mirror 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Banaanbax looga soo horjeedo ka noqoshada go’aan ay dhawaan gaartay dowlada Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Boqolaal dad shacab ah ayaa ka qaybgalay banaanbaxa, iyagoo […]
Golaha degmada Dangorayo oo xalay saq-dhexe guddoomiye u doortay murashax ay dowladu wadatay
September 22, 2016 Puntland Mirror 1
Garoowe-(Puntland Mirror) 19 xubnood oo dowladu ku sheegtay golaha deegaanka degmada Dangorayo ayaa habeenimadii xalay saq-dhexe doortay guddoomiye, iyadoo uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali. Sida horey uu u ogaa warsidaha […]
September 21, 2016 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Doorashadii guddoomiyaha degmada Dangorayo ee gobolka Nugaal ayaa maanta dhici weyday kadib markii ay hareeyeen muran xoog weyn oo ka dhashay soo xulida xubnaha golaha degmada. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali iyo wefdi […]
Soomaaliya oo sideed safiir ku amartay in ay dalka soo galaan 30 beri gudahood
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda Soomaaliya ayaa ilaa sideed safiir oo Soomaaliya u fadhiya wadamo dibada ah oo u badan Carabta ku amartay in ay dalka ku soo galaan 30 beri gudahood, sida lagu sheegay bayaan kasoo [...]
Madaxweynaha Puntland oo la kulmay danjiraha Finland u qaabilsan Soomaaliya
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed ayaa maanta oo Arbaco ah kulan la yeeshay Tarja Fernandez oo ah danjiraha Finland u qaabilsan Soomaaliya. Kulanka ayaa ka dhacay xarunta madaxtooyada Puntland oo kutaala caasimada Puntland [...]